'ငါထိုင်ခုံမှာသုံးနာရီလောက်ငိုခဲ့ရတယ်' - ဖလော်ရီဒါပစ်ခတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည် - သတင်း
'ငါထိုင်ခုံမှာသုံးနာရီလောက်ငိုခဲ့ရတယ်' - ဖလော်ရီဒါပစ်ခတ်မှုမှလွတ်မြောက်လာသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်နီကိုလပ်စ်ခရုဇ်သည်ဖလော်ရီဒါအထက်တန်းကျောင်းတွင်မီးသတ်တပ်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရာနှင့်ချီသောကျောင်းသားများကိုသူတို့၏စာသင်ခန်းများမှသေနတ်သမားအားချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်ဖြင့်မီးဖွင့်ရန်အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ ၁၇ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၄ ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး၊ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။
ဒီကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်ကတည်းကကျောင်းသားများသည်အမေရိကန်သေနတ်ဥပဒေကိုရှုတ်ချရန်စုဝေးခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းသားတစ် ဦး မှာ Sheryl Acquaroli ဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းတွင်ဆန္ဒပြပွဲများတွင်မိန့်ခွန်းများပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်နယ်မြို့တော်တွင်ဆန္ဒမဲပေးပြီးနောက်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သို့စာတစ်စောင်ပို့ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ကျောင်းတွင်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းနှင့်ပြီးနောက်သူမ၏တွေ့ကြုံမှုများအကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမင်းပြောပြနိုင်မလား။
“ ငါတို့မှာမီးတောက်တောက်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါနဲ့ငါတို့အားလုံးအပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ ပြီးတော့လူတွေကသေနတ်သံတွေကြားတယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါကြောင့်အပြင်ဘက်ကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြဘဲဆရာများကကျောင်းမြေနေရာကိုအနက်ရောင် code (ဗုံးခြိမ်းခြောက်မှု) ကဲ့သို့စွန့်ခွာရန်ပြောလိုက်သည်။ ဤအချိန်တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ၀ ီရိယနှင့်ပထမဆုံးရဟတ်ယာဉ်ပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်အဖေကိုခေါ်ပြီးသူကကျောင်းမှတတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးဝေးရန်ပြောပါသည်။
'' လူအတော်များများကအလယ်တန်းကျောင်းရဲ့လယ်ကွက်ထဲကို ၀ င်လာတဲ့ခြံစည်းရိုးကိုခုန်ဆင်းလာကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါတို့ကိုမပြောတတ်လို့ငါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်ငါလည်းခုန်လိုက်ပြီး၊ ကျောင်းများ။ အဲဒီမှာကျွန်မဆရာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်နေလဲလို့သူ့ကိုမေးတဲ့အခါသူကသေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခံလိုက်ရပြီလို့ပြောတယ်
သူငယ်ချင်းတွေရှာပြီးအမေကိုဖုန်းဆက်တယ် ဒုတိယကတော့ကျမကျောင်းကိုပစ်သတ်ခံလိုက်ရတာကိုအမေကိုပြောပြရမယ်။ ကျွန်မထိုင်ပြီးငိုတော့တာပဲအသက်ရှူလို့မရဘူး။ ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီးသုံးနာရီလောက်ထိုင်နေတယ်။
“ ကျနော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကဗီရိုထဲမှာနေတယ်၊ ​​နောက်တစ်ယောက်ကသေနတ်သမားရဲ့အဆောက်အအုံမှာပဲရှိနေတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုကယ်ဖို့မလာခင်နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သေဆုံးသွားပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆေးရုံတက်နေတယ်။
'' ကျိန်းသေရန်ပုံငွေပို။ လူများကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုလိုအပ်ကြောင်း၊ ကျောင်းများတွင်လိုအပ်ကြောင်းအမြဲတမ်းပြောကြသည်။ သို့သော်များစွာသောကျောင်းများသည်အမှန်တကယ်ရရှိသောငွေကြေးပမာဏမည်မျှရှိသည်ကိုနားမလည်ကြပါ။ နောက်တစ်ခုကလူအများအပြားကမတတ်နိုင်တာကကျန်းမာရေးကုထုံးနဲ့မကုသဘူးဆိုတာပဲ။ '
ဒီဟာကိုသေနတ်သမားမှစိတ်ကျန်းမာရေး / အစွန်းရောက်ခြင်းပြanနာဟုသင်ထင်ပါသလား။
စိတ်ကျန်းမာရေးကဏ္ played တစိတ်တပိုင်းပါဝင်နေစဉ်သေနတ်ဘေးအန္တရာယ်သေချာသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများတွင်စိတ်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများရှိသော်လည်းအမေရိကသည်ရာနှင့်ချီသောလူများအသတ်ခံရသည့်တစ်ခုတည်းသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံဖြစ်သည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်သင့်တယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဓိကပြthat'sနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ '
ဒီ ၁၆ နှစ်အရွယ် Parkland Survivor တွင်ကွန်ဂရက်အတွက်သတင်းစကားရှိသည်
ချစ်ခင်ရပါသောကွန်ဂရက်၊ ဖလော်ရီဒါတွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံရသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ Sheryl Acquaroli သည်သင့်အားတွေ့မြင်ရပြီးသူမတွင်မေးခွန်းများရှိသည်။
ကတင် BuzzFeed သတင်းများ ကြာသပတေးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2018 ရက်တွင်
တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းတွင် Sheryl သည်သူမကျောင်းသားများနှင့်အတူသေနတ်ကိုင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Marjory Stoneman ဒေါက်ဂလပ်အထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားများသည်လာမည့်အပတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပြန်လာမည်။
'' ကောင်းပြီ၊ ကျောင်းတက်ဖို့မလိုဘူး၊ ညနေ ၂:၄၀ မှာည ၁၁း၄၀ မှာထွက်မယ်။ လူတိုင်းအတွက်ကျောင်းနေရာမှာအကြံပေးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ် ''
ရိုးသားဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ် ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆရာများကိုတွေ့ရ။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမဆိုထင်ထားသည်ထက် ပို၍ အားကြီးသည်ဟုကြီးမားသောကြေငြာချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ လူတိုင်းကလူတိုင်းကိုအရမ်းထောက်ခံတယ်၊ ငါတို့အားလုံးကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်၊ လူတိုင်းကမိသားစုလိုအတူတူရပ်နေကြတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်လူတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ ဒီအချိန်တွေမှာလူတိုင်းဘယ်လောက်နီးကပ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်ရတာအံ့သြစရာပဲ! '
'' ဖလော်ရီဒါမှာဒီရိုင်ဖယ်သေနတ်သမားတစ်ယောက်နောက်တယောက်သေဆုံးတာကသူတို့ (ပြည်နယ်အိမ်) မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီလူတွေသေပြီဆိုတာသူတို့မှားသွားလိမ့်မယ်။ ' Sheryl Acquaroli သည်အထက်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလူ ၁၇ ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်။ semiautomatic သေနတ်များနှင့်ကြီးမားသောစွမ်းရည်မဂ္ဂဇင်းများကိုတားမြစ်ရန်အတွက်ဥပဒေကြမ်းတခုချမှတ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲအရေအတွက်ကိုကြည့်သောအခါသူမငိုကြွေးခဲ့သည်။ http://cnn.it/2oikrKK
ကတင် CNN အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 20, 2018 တွင်
မင်းကသေနတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲ ၀ င်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာမင်းရဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ဒီကိစ္စကိုပစ်မှတ်ထားချင်တဲ့လူငယ်တွေကိုမင်းဘာပြောမလဲ။
'တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါ။ သင်၏မိဘများကိုသင်အမေရိကန်၌နေထိုင်ပါကမဲပေးရန်ဆွဲဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်စုဝေးဆန္ဒပြခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းစကားလုံးကိုဖြန့်ဝေရုံမျှဖြင့်ပင်လျှင်များစွာကူညီနိုင်သည်။ ငါကူညီနိုင်သမျှဝေးဝေးသွားဖို့မလိုအပ်တော့ဘူး၊
သငျသညျအခုအချိန်မှာ Trump နှင့်အတူရင်ဆိုင်ရဖို့တစ်ခုခုမျက်နှာပြောနိုင်ပါကဘာဖြစ်မလဲ
“ သူ့ကိုငါပြောချင်တာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသေချာပေါက်အဖြေရှာချင်တာကမင်းဘာလို့တစ်ခုခုမလုပ်တာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေဟာအပြင်မှာအသတ်ခံရပြီးသင်တို့ကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဂေါက်သီးကစားတာတွေအားလုံးကိုအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ '
2020 ငါ instagram filter ကိုဖြစ်လိမ့်မည်
သူမ၏လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသလားဟုမေးမြန်းသောအခါသူက 'ကျိန်းသေတယ်! ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကိုမပြီးဆုံးသေးခင်အထိအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။
နီကိုလပ်စ်ကရုဇ်ကို ၁၇ မှုသတ်ဖြတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။ #NeverAgain လှုပ်ရှားမှုကိုထပ်မံထောက်ခံရန်အတွက်မတ်လတွင်ပြုလုပ်မည့်စုဝေးမှုများရှိလိမ့်မည်။
ဤတွင်ပြသထွက်ခွာကတည်းက Instagram ကိုအပေါ်ပယ်ချခဲ့သည့် 2018 မတ်ေတာကျွန်းငြင်းပယ်ခံရဘယ်လောက်ပါပဲ
အဆင့် - ဤသူများသည်အတင်းအဖျင်းမိန်းကလေးမိသားစုများ၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်
သင်တစ် ဦး စတန်းဖို့ဒ်ကခုန်အဖွဲ့သည်ပေါ်တွင်လျှင်သင်သာသိသောအရာ
Steph By By Steph ရဲ့အဝတ်အစားဒဏ္legာရီပုံပြင်တွေနဲ့အတူကျွန်မတို့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်